BAAQ LA XIRIIRA KU-QABASHADA SHIR WEYNE QARAN DALKA GUDIHIISA !
Mogadishu,30th March 2003,
Kulan shalay lagu qabtay degmada Deyniile ee magaalada Muqdsiho oo ay ka soo qayb galeen qaar ka tirsan hogaamiya kooxeedyada (Group 8) iyo Madaxda Dawladda KMG ah Cabdiqassim Salaad Xasan oo la xiriiray aayatiinka Xukuumadda KMG ah oo waqtigeedu gabaabsi yahay iyo waxa laga yeelayo oo la gudboon, mar hadii ay caddaatay in Soomaalidu mar kale ku fashilmeyn shirkii nabadeynta ee uga socday dalka Kenya .
Hogaami kooxeedyada halkaa ku kulmay oo ay ka mid ahaayeen Maxamed Qanyare Afarx, Cusmaan Xasan Cali Caato, Maxamed Ibraahim Xaabsade iyo Yuusuf Mire Seeraar waxaa ay hadalkooda ku soo bandhigeen in loo baahan in la tixgeliyo baaq uu Cabdiqassim Salaad Xasan hore u soo jeediyay oo ku saabsanaa in Soomaalidu isugu timaado shirweyne dalka gudihiisa lagu qabto . Goobta lagu qabanyo iyo kooxaha loogu yeerayo iyo cidda martigelinaysa shirka noocaas ah, hadiiba uu suurtagal noqdo, laguma sheegin hadalkooda, Waxaase jirta oo cid kasta u muuqata mudada uga hartay cimriga Dawladda KMG ah oo ka yar shan bilood, oo iminka la moodo in Hogaamiye Kooxeedyada qaarkood ay ka welwelsan yihiin .
Waxay hogaamiye kooxeedyada ku kulmay kulankaa ku heshiiyeen sida ay lama huraan u tahay dhismaha gobolka banadir iyo adkeynta nabadgelyada magaala madaxda Muqdisha, taas oo ka tarjumeysa heshiiskii ku dhexmaray kooxada Soomaalida magaalada El-Doret ee dalka Kenya dhamaadkii sanadkii tagay ee 2002 . Waxay kaloo si gaar ah u carabaabeen, una aqoonsadeen dowrka muhiimka ah ee bulshada u dhalatay magaala-madaxda ku leeyihiin maamulka Gobolka, hadii la doonayo nabad waarta oo saldhig u noqota dhismaha Dawlad Soomaaliyeed oo mideysa shacabweynaha.
Sida la ogsoon yahay, Madaxda Dawladda KMG ah Cabdiqassim Salaad Xasan ayaa beryahan waday barnaamijyo uu ku qaabilayo Hogaamiye Kooxeedyada Muqdisha qaarkood, taas uu uga gol leeyahy sidii uu uga dhaadhicin lahaa qorshahiisa la xiriira qabashada shirweyne qaran oo Soomaalidu leedahay oo dalka gudahiisa ka dhaca. Waxaana jirta inay dhowaan is-arkeen Mudane Cali Mahdi Maxamed oo ka mid ah odoyaasha qadarinta leh ee ka soo jeeda Bahda Mudulood, siyaasadda Soomaaliyana wasni weyn ku leh .